Mamaneja epassword haana kuchengetedzeka sezvavanotaura | Linux Vakapindwa muropa
Mamaneja epassword haana kuchengetedzeka sezvavanotaura
Kubatana kwepamhepo kwave kuwanda uye kuwanda kubvira ma2010s, kunyanya nekuuya kwenzvimbo dzekudyidzana. Mazhinji masevhisi epamhepo anokurudzira vashandisi kuti vasashandise password imwechete kwese kupi.
Apa ndipo panopinda mamaneja ephasiwedi kubatsira vashandisi kuchengeta ese mapassword avanenge vari pakati nechengetedzo (wedzera metadata uye zvimwe zvakawanda).
1 Mashandisiro ekushandisa password password?
2 Haasi ese zvinhu sezvavari kupenda
2.1 Kunyange software yemahara haibvumirwe
2.2 Pakuongorora kwevatariri vekuchengetedza
2.3 Linux haisi iyo yega yega
Mashandisiro ekushandisa password password?
Mamaneja epassword bvumira iyo kuchengetedza uye kutora kwemashoko akavanzika kubva kune yakavharidzirwa dhatabhesi.
Vashandisi vanovatenda kuti vape zvirinani chengetedzo inovimbisa pakabvaruka zvisina basa kana ichienzaniswa nedzimwe nzira dzekuchengetedza mapassword, senge asina kuchengeteka mavara mafaera.
Mune mamwe mazwi, maneja epassword anogona kuchengeta ako ese mapassword anoshandiswa paInternet munzvimbo imwechete, saka anobatsira kwazvo.
Haasi ese zvinhu sezvavari kupenda
Izvo zvataurwa, boka revanozvimirira chengetedzo testers, ISE yakashumwa svondo rino kuti vamwe vevanonyanya kufarirwa mamaneja epassword vane zvimwe zvinokuvadza izvo zvinogona kushandiswa kubira ruzivo rwekuzivikanwa kubva kune vashandisi, uchifungidzira kuti havasati vamboshandiswa nevechitatu mapato.
Mumushumo wakapihwa neboka, yakatsanangura chengetedzo inovimbisa kuti mamaneja ephasiwedi anofanirwa kupa uye kuongorora mashandiro epasi pevashanu vanozivikanwa maneja epassword.
Kunyange software yemahara haibvumirwe
Aya ndiwo mamaneja edzidziso 1Password, Keepass, Dashlane, uye LastPass. Ese aya mamaneja epa password akanyorwa pazasi anoshanda nenzira imwechete, ivo vanodaro.
Vashandisi vanopinda kana kugadzira mapassword mune software uye vanowedzera akakodzera metadata (semuenzaniso, mhinduro kumibvunzo yekuchengetedza uye saiti iyo password yakagadzirirwa).
Ruzivo urwu rwunonyorwa uye rwunobviswa chete pazvinenge zvakakodzera kuti sikirini itakurire kubhurawuza plug-in iyo inozadza pasiwedhi pawebhusaiti kana kuikopa kubhodhibhodhi kuti ishandiswe.
Kune mumwe neumwe wevatungamiriri ava, iro boka rinotsanangura matunhu matatu ekuvapo: kwete kumhanya, kukiyiwa, uye kukiyiwa.
Mune yekutanga nyika, iyo password password inofanirwa kuverengera kunyorera kuitira kuti chero bedzi mushandisi asingashandisi pasiwedhi diki, anorwisa haakwanise kungofungidzira iro password tenzi mu password.
Mune yechipiri nyika, hazvifanirwe kuve zvichikwanisika kutora iyo tenzi password kubva mundangariro zvakananga kana neimwe nzira yekudzosera iyo yekutanga tenzi password.
Uye mudunhu rechitatu, zvese zvivimbiso zvekuchengetedzwa kwepasina-password password maneja zvinofanirwa kuiswa kune password password mune yakakiyiwa nyika.
Mukuongorora kwavo, vanoedza vanoti vakaongorora algorithm inoshandiswa nechero password password kushandura tenzi password kuita kiyi yekunyorera uye kuti iyo algorithm inoshaya kuomarara kwekutsungirira kurwisa kwemazuva ano.
Pakuongorora kwevatariri vekuchengetedza
Muchiitiko che 1Password 4 (vhezheni 4.6.2.628), kuongororwa kwayo kwekuchengetedza kwekushandira kwakawana dziviriro zvine musoro pakuratidzwa kwemamwe mapassword mune isina kuvhurwa mamiriro
Nehurombo, izvi zvakapfuurwa nekubata kwayo tenzi password uye akasiyana akaputsika ekushandisa ruzivo kana uchienda kubva kukiyiniti nyika kuenda kukiyaki nyika. Iyo tenzi password inoramba iri mundangariro.
Naizvozvo, 1Password tenzi password inogona kudzoreredzwa sezvo isina kudzimwa kubva mundangariro mushure mekuisa iyo password password mune yakavharirwa mamiriro.
Kutora 1Password (vhezheni 7.2.576), Chakavashamisa ndechekuti vakawana izvo haina kuchengetedzeka kumhanya kupfuura 1Password mune yayo yapfuura vhezheni pane 1Password 7 sezvo yakatsemura mapassword ega ega mudhatabhesi ongorora iyo data nekukurumidza painosvinudzwa uye kubatirirwa, kusiyana ne1Password 4 iyo yakangochengeta imwechete yekupinda panguva.
Zvakare wakaona kuti 1Password 7 haiburitse mapassword ega ega, kana iro password tenzi, kana yakavanzika memory kiyi kana uchienda kubva kukiyiniti nyika kuenda kukiyaki nyika.
Zvino, mukuongorora kweDashlane, maitiro acho airatidza kuti kwakanangana nekuvanza zvakavanzika mundangariro kudzikisa njodzi dzekubvisa.
Zvakare, kushandiswa kweGUI uye ndangariro mafuremu ayo aidzivirira kuendesa kwezvakavanzika kune akasiyana mashandiro esisitimu APIs yaive yakasarudzika kuDashlane uye yaigona kuvaburitsa mukutora nzeve nemarware.
Linux haisi iyo yega yega
Kusiyana nevamwe mamaneja epassword, KeePass iyo yakavhurwa sosi purojekiti. Zvakafanana ne1Password 4, KeePass inonyora zvinyorwa sezvavanosangana.
Nekudaro, ivo vese vanoramba vari mundangariro nekuti ivo havana kubviswa zvakasiyana mushure mekubatana kwega kwega. Iyo tenzi password inodzimwa kubva mundangariro uye haigone kuitwazve.
Nekudaro, nepo KeePass ichiedza kuchengetedza zvakavanzika nekuzvidzima kubva mundangariro, zviripachena kuti pane mamwe mabhugi mune aya mafafura, nekuti isu takawana, ivo vanoti, kunyangwe mune yakavharirwa mamiriro, isu tinogona kuburitsa zvainge zvabatana nazvo.
Zvinyorwa zvakabvumirwa zvinoramba zviri mundangariro kunyangwe KeePass yaiswa munzvimbo yakavharirwa.
Pakupedzisira, senge mune 1Password 4, LastPass inovanza iyo password password kana ichinge yapinda mune yekuvhura munda.
Kana kiyi yekududzira ikatorwa kubva kune iro password password, iro tenzi password rinotsiviwa nemutsara "lastpass".
mabviro: security evaluator
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Mamaneja epassword haana kuchengetedzeka sezvavanotaura
Password haifanire kuchengetwa chero kune imwe nzvimbo kunze kwebhuku rekunyora rakanyorwa nepeni yebhokisi ... mamwe ese akafanana nenyaya yababamunini.
kubvumirana zvachose, sezvo kabhuku kemabhuku hapana kana chinhu sezvo zvichinetsa zvishoma kune vanoba
pinda mumba mako kuba bhuku rako
Chii chingave chakachengeteka maneja?
Kuwedzeredza kwese, zviri pachena kuti maneja wepassword haisi 100% yakachengeteka, nekuti hapana chinhu chiri 100% vanababa vakachengeteka… Kunyangwe zvakadaro, nguva dzose, zvinogara zvakachengeteka kushandisa maneja wepassword pane kusashandisa. Penzura nebepa? Hazvina musoro kunze kwekunge iwe uchingova nemapassword matatu kana mana, asi kune vanhu vakaita seni vane makumi mashanu, zana kana anopfuura maakaundi akasiyana munzvimbo dzakasiyana hazviite kana nepfungwa shoma, kune izvo isu tinofanirwa kuwedzera kuti kana ukarasa bepa kana iyo pendrive , vaudze kuonekana nehupenyu hwako hwe digital. Muna 3 hazviite nepfungwa diki yekuchengetedza mapassword ako kumwe kunhu mukati megore, ese akanyorwa zvakanaka. Lastpass ndicho chinhu chakachengeteka kushandisa nhasi, chero munhu anoti neimwe nzira haazive zvavari kutaura nezvazvo, ivo vanongova mushandisi wepakati. Kwaziso.
ndinoshandisa https://bitwarden.com/ Chii chinotaurwa neiyi password password maneja?